Nahumi 1 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mwari anotsiva mhandu dzake (1-7)
Mwari anoda kuzvipira kwakazara (2)
Jehovha anofunga vaya vanopotera kwaari (7)
Ninivhi ichaparadzwa zvachose (8-14)
Achaparadza zvekuti haazodzokorodzi (9)
Mashoko akanaka nezveJudha anoziviswa (15)
1 Mutongo weNinivhi:+ Bhuku rezvakaratidzwa Nahumi* wekuErikoshi: 2 Jehovha ndiMwari anoda kuzvipira kwakazara+ uye anotsiva;Jehovha anotsiva uye akagadzirira kuratidza hasha dzake.+ Jehovha anotsiva mhandu dzake,Uye anochengeta hasha dzake kuti azodziratidza pavavengi vake. 3 Jehovha anononoka kutsamwa+ uye ane simba guru,+Asi Jehovha haazomboregi kuranga vanofanira kurangwa.+ Anofamba ari mumhepo inoparadza uye mudutu,Uye makore ndiwo guruva rinopfumburwa netsoka dzake.+ 4 Anotuka gungwa,+ oriomesa;Uye anoomesa nzizi dzese.+ KuBhashani nekuKameri kuri kuoma,+Uye maruva eRebhanoni ari kuoma. 5 Iye ari kuita kuti makomo azununguke,Uye kuti zvikomo zvinyunguduke.+ Chiso chake chichaita kuti pasi padengenyeke,Pamwe chete nenyika yacho nevanhu vese vanogara mairi.+ 6 Ndiani angamira pamberi pake kana atsamwa?+ Uye ndiani angaramba akamira paanoratidza hasha dzake huru?+ Hasha dzake dzichadururwa semoto,Uye achaita kuti matombo apwanyike. 7 Jehovha akanaka,+ inhare* pazuva rekutambudzika.+ Anofunga* vaya vanopotera kwaari.+ 8 Achaiparadza* zvachose nemafashamo,Uye rima richatevera vavengi vake. 9 Pane here chamungaronga kuti murwisane naJehovha? Iye ari kuparadza zvese. Achaparadza zvekuti haazodzokorodzi.+ 10 Vakaita seminzwa yakarukana,Uye vakaita sevanhu vakadhakwa nedoro;*Asi vachaparadzwa semashanga akaoma. 11 Mauri muchabuda munhu anorongera Jehovha zvakaipa,Achipa zano risingabatsiri. 12 Zvanzi naJehovha: “Kunyange zvazvo vakanga vaine simba uye vari vazhinji,Vachatemwa vachiwira pasi uye vachafa.* Ndakakuranga* asi handizokurangi zvakare. 13 Iye zvino ndichatyora joko rake rakaiswa pauri,+Uye ndichadimbura zvawakasungwa nazvo. 14 Jehovha arayira pamusoro pako* kuti,‘Zita rako richadzimwa. Ndichaparadza mifananidzo yakavezwa nemifananidzo yesimbi* iri muimba* yavanamwari vako. Ndichakugadzirira guva, nekuti unosemesa.’ 15 Onai! Mumakomo mune tsoka dzeuya ari kuuya nemashoko akanaka,Iye ari kuzivisa rugare.+ Ita mitambo yako+ iwe Judha, zadzisa mhiko dzako,Nekuti uya asingabatsiri haazopfuurizve nemauri. Achaparadzwa zvachose.”
^ Kureva kuti “Munyaradzi.”
^ Kana kuti “Anochengeta.” ChiHeb., “Anoziva.”
^ Kureva, Ninivhi.
^ Kana kuti “nedoro regorosi.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “uye achapfuura nepakati pavo.”
^ Kureva, Judha.
^ Kureva, Asiriya.
^ Kana kuti “yesimbi yakanyungudutswa.”